Faha 150 taona nidiran’ny finoana katolika tao Fianarantsoa - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
"L’être Fokonolona" comme catalyseur des pratiques politiques il y a 14 heures
Finoana sy tantara
Faha 150 taona nidiran’ny finoana katolika tao Fianarantsoa
Haja il y a 1 moi
Nosokafana tamin’ny alahady 27 desambra 2020 fetin’ny Fianakaviana masina ny fankalazana ny faha 150 taona nidiran’ny finoana teto Fianarantsoa; nisy ny Sorona Masina notarihin’i Monseniera Rabemahafaly Fulgence, arsevekan’i Fianarantsoa, notanterahina teny amin’ny Paroasy Kadedraly Ambozontany.
Taon-jobily niomanana tao anatin’ny telo taona izy ity. Ny taona 2018 nibanjinana an’i Masina Maria Virjiny nampianatra ny tantaram-pamonjena tamin’ny fomba maro isan’izany ny nampianarany Sapile an’i Masimbavy Bernadette ka feno zato taona tamin’ny 11 febroary 1958. Ny taona 2019 an’i Md Jozefa, nihainoana indray ilay hafatra mafonja nentin’ny Papa Joany Paoly faharoa teto fianarantsoa ny 1 Mey 1989. Voasoritra tamin’izany ny adidin’ny Ray aman-dReny mampita ny zanany tonga taona, eo amin’ny fanorenan-tokantrano. Ny taona 2020 niombonana tamin’i Jesoa zaza, ka nibanjinana Azy hatramin’ny nanolorany ny ainy ho sorona tambin’ny ota. Ny Fianakaviana Masina tao Nazareta fototry ny Finoana ho an’ny taon-jobily.
Fotokevi-dehibe mandritra ny taon-jobily ny hoe: “Ny Batemy nampiombona antsika amin’i Jesoa”. Mifandray amin’izany ny vavaka hasiviam-bolana izay atao isan’andro, nanomboka ny daty nanokafana ny fankalazana ary mifarana amin’ny 30 septambra 2021. Notsofin-drano ihany koa taorianan’ny Sorona masina ny tsangambaton’i Masina Maria, miorina ao Ambatomena akaikin’ny fasan’ny misionera izay nitondra ny finoana teto Fianarantsoa.
Ny nidiran’ny finoana teto Fianarantsoa
Tonga teto Fianarantsoa i Mompera Marc Finaz, zezoita, tamin’ny 5 oktobra 1871 hitory ny Vaovao Mahafaly. Lehilahy mpamaky lay amin’ny fitoriana ny fanjakan’Andriamanitra satria izy indrindra no nanao Lamesa voalohany tao Antananarivo tamin’ny andron-dRanavalona I na dia teo aza ny fandrarana ny fivavahana kristianina. Mbola nitohy ny famakiana lalana rehefa afaka nitory an-kalalahana ny finoana kristianina ireo Misionera ka tody soa aman-tsara taty Fianarantsoa i Mompera. Efa nanam-paniriana ho aty Atsimo ry zareo ny taona 1861, folo taona taty aoriana anefa izany vao tanteraka. Isan’ny nanampy be dia be tamin’ny fanomanana ny dian’izy ireo sy nampiomana ny olona taty Fianarantsoa ry Itompokolahy Rainiboto Raphael avy any Tanjombato Antananarivo sy Ratsimba Piera, lehilahy nanana tantara manonkana tamin’ny fampijoroana ny finoana Katolika teto Fianarantsoa. Tsy mora velively ny fiainana nodiavin’i Mompera sy ireo Katolika voalohany tamin’izany fotoana izany araka ny voarakitry ny tantara. Ny antony dia noho ny fironan’ny olona tamin’ny fivavahana protestanta. Saika tamin’io finoana io daholo no nisy ny mpitondra hatrany amin’ny tampony ka hatraty amin’ny vahoaka. Noho izany, sarotra ny fampielezana ny finoana satria nisalasala ny hanome fahazoan-dalana azy ireo ny praiministra Rainilaiarivony tamin’izany raha hanorina ny trano hivavahana.
Nisahana ny Diosezin’i Fianarantsoa ny pretran’ny fikambanan’i Jesoa na ny zezoita tany am-boalohany fa nanomboka tamin’ny taona 1972 kosa dia nandray an-tanana izany ny pretran’ny Diosezy.
Tsy maintsy jerena akaiky ny lafiny fanabeazana hoy ny Eveka satria mafy ny rivotra entin’ny fanatontoloana izay mety hanova zavatra haingana, ka manampy izany ny serasera na ny fifandraisan’ny mpiara-belona. Manoloana ireo anefa no ijoroana ho vavolombelona maha kristianina. Misy àry ny torolalana momba ny fanabeazana hatramin’ny zaza ilay mbola eo am-pelatanan’ny ray aman-dreny mandeha mianatra ka hatreny amin’ny oniversite. Ampahafantarina ny tokony hataony ny tanora eo amin’ny fivelomany, fitantanana ny tany misy, ny toe-karena, ny fahasalamana, ary ny lafiny fiarahamonina. Beazina handray andraikitra ihany koa ny ankizy sy ny tanora any amin’ny fikambanana masina misy azy. Tsy ny any an-dakilasy ihany na any am-piangonana fa tanjona ny ho tonga amin’ny asa fanoloran-tena hanao Komity. Irosoana ny fizakan-tenan’ny Diosezy amin’ny fanamafisana ny asan’ny Komitin’ny sori-dalana pastoraly fa indrindra mikasika ny fitantanana. Hatao mangarahara io mba hananan’ny Kristianina risi-po hanatanterahany ny adidy hampandrosoana ny Paroasy sy ny Distrika. Paroasy 10 no mandrafitra ny Diosezy eto an-drenivohitra miampy ireo distrika any ambanivohitra ary 1000 latsaka kely ny isan’ny Fiangonana.
Point de vue : "L’être Fokonolona" comme catalyseur des pratiques politiques - il y a 14 heures
Teny Mahavelona : « Te hihavana amintsika Andriamanitra» - il y a 8 jours
Teny Mahavelona : « Sitrana ny boka !» - il y a 13 jours